Media sosialy sy fitantanana fanoherana | Martech Zone
Androany maraina dia namaky taratasy fotsy fotsy lehibe hita tao amin'ny tranokalan'i Aprimo aho, tamin'ny fampidirana haino aman-jery sosialy.
Ireo mpivarotra dia tsy tokony hanomboka amin'ny voalohany mba hananganana ny fahafahan'ny lalao sosialy manova ny lalao amin'ny fifangaroan'ny fifandraisana efa misy. Amin'ny alàlan'ny fitondrana ny haino aman-jery sosialy ho toy ny fanitarana ny haino aman-jery vaovao sy ny Web 1.0, ireo mpivarotra dia manararaotra ireo fahaiza-manaony vaovao ao anatin'ny fantsom-pifandraisana sy loharanon-karena misy.
Ny whitepaper dia miteny amin'ny anjara asan'ny varotra ary nivadika somary nivadika ny marketing. Ireo mpivarotra - izay matetika tsy nifandray tamin'ny daholobe intsony - dia takiana ankehitriny hampita sy hitantana ampahibemaso ny marika. Tsy maintsy manatanteraka izany izy ireo fa tsy misy fiofanana fitantanana fanoherana. Niresaka an'io koa aho tamin'ny fampisehoana ao amin'ny Webtrends Engage.
Mandritra izany fotoana izany, ny ny mpivarotra dia antenaina handray ny toerany amin'ny haino aman-jery sosialy, fampiharana teknika marketing sy fifandraisana ifanaovan'ny tsirairay izay tsy mbola nataon'izy ireo lafatra.
Ny whitepaper dia manome tolo-kevitra efatra:
Mametraha teboka ifantohana amin'ny alàlan'ny fametrahana olona iray amin'ireo mpiasa marketing ho tompon'andraikitra amin'ny media sosialy. Ity olona ity dia tokony ho tompon'andraikitra amin'ny famolavolana ny paikadin'ny haino aman-jery sosialy amin'ny marketing, ao anatin'izany ny famoronana dingana iray izay hametra ny fetran'ny fiara hampiasaina, ny fomba hitantanana azy ireo, ary ny olona tokony hatolotra azy ireo mifanaraka amin'ny politikan'ny orinasa.
Miaraha miasa amin'ireo lahasa hafa izay mandray anjara amin'ny tsingerin'ny fividianana lehibe kokoa, ao anatin'izany ny serivisy ho an'ny mpanjifa sy ny fitantanana ny vokatra. Amin'ny taona 2010, mihoatra ny 60% amin'ireo orinasa Fortune 1000 miaraka amina tranokala no hanana endrika vondrom-piarahamonina an-tserasera izay azo ampiasaina amin'ny tanjon'ny fifandraisan'ny mpanjifa. Na izany aza, zava-dehibe ny hamantaran'ny marketing ny anjara asan'ny media sosialy amin'ny hetsika presales avy amin'ireo izay mifantoka amin'ny serivisy ho an'ny mpanjifa mba hahazoana antoka fa voatsinjara araka ny tokony ho izy ny fananana amin'ireo asa maro samihafa izay mandray anjara amin'ny fanatanterahana ny paikady CRM lehibe kokoa an'ny orinasa.
Asaivo miditra amin'ny fiofanana momba ny varotra ny olona amin'ny marketing, indrindra ireo izay manao dinika sosialy ahafahan'ny serasera ifanaovana. Ireo mpivarotra tsy manana fiofanana na traikefa amin'ny "fitantanana fanoherana" dia marefo indrindra amin'ny tontolon'ny media sosialy, satria ny mpanjifa mitsikera an-kalalahana ny mpamatsy iray sy ny vokatra ao amin'ny seha-bahoaka.
Miasa ho mpanelanelana miaraka amin'ireo mpitarika varotra sy mpivarotra maniry handray anjara amin'ny haino aman-jery sosialy, indrindra ireo toerana izay ifandraisan'izy ireo amin'ny maro, ary hofanina amin'ny torolàlana mitovy amin'ny torolàlana omena an'ireo matihanina amin'ny varotra sy fifandraisana mba hiantohana ny fiarovana ny marika sy ny fandefasan-kafatra tsy tapaka.
Nanome tari-dalana vitsivitsy aho mpivarotra hanomboka handray ny haino aman-jery sosialy - fa ny antsipiriany fotsy kosa dia bebe kokoa amin'ny paikadin'ny orinasa ankapobeny. Izaho koa dia efa manatrika fiofanana varotra nandritra ny taona lasa ary tena hanome sosokevitra izany ho an'ireo mpivarotra rehetra! Manadihady aho Bill Godfrey, CEO an'ny Aprimo anio, ary hiresaka momba an'io fisehoan-javatra io - mitady horonantsary ho avy!
Ny rindrambaiko marketing an'ny fangatahana aprimo, apetrak'i Aprimo, dia ahafahan'ny mpivarotra B2C sy B2B hitety tsara ny fiovan'ny marketing amin'ny alàlan'ny fifehezana ny teti-bola sy ny fandaniam-bola, hanafoana ny silo anatiny miaraka amin'ny alàlan'ny fivezivezena mirindra sy ny fanatanterahana fampielezan-kevitra marobe ahafahana mitondra ROI refy. avy amin'ny Aprimo tranonkala.
Tags: fitantanana fanoheranafanoherana varotrahaino aman-jery sosialyfitantanana fanoherana ara-tsosialy
Mar 2, 2010 amin'ny 10: 59 AM
Ny haino aman-jery sosialy dia azo antoka fa manafaingana ny famerenana ny "sampana" satria mihanjavozavo ny andalana rehetra. Tsara ho an'ny orinasa.